DAAWO+LIVE: Farmaajo & Kheyre oo dawlad adag u soo kaxeystay ceyrinta Axmed Madoobe. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO+LIVE: Farmaajo & Kheyre oo dawlad adag u soo kaxeystay ceyrinta Axmed Madoobe.
DAAWO+LIVE: Farmaajo & Kheyre oo dawlad adag u soo kaxeystay ceyrinta Axmed Madoobe.
July 29, 2019 Ali Osman Maqal Iyo Muuqaal, Soomaliya, Wararka maanta 1
KIsmaayo: Dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa ku guuldareystay in ay faragalin toos ah dhankeeda kaga sameyso doorashada Madaxwyene-nimada ee Jubbaland, waxay taasi bedelkeeda bilowday in ay adeegsato dawladda Itoobiya.
XOG XASAASI AH OO LIVE AH KA DAAWO HALKAAN
Saraakiil kasocda Urur gobaleedka IGAD ayaa tagay magaalada Kismaayo, waxayna kulamo la yeesheen Madaxweynaha Jubbaland oo ay arrimahan ka wada hadleen.
Runtii anigu aad iyo aad baan ula dhacay sida asluubta iyo akhlaaqda leh ee aad uga faallootaan dhacdooyinka iyo xogaha ka jira guda Soomaaliya. waxaan ku idinku oran (odhan)lahaa waraysiga dad macne leh oo ra’yigoodu dadka wax ka badeli karo. waxaad kaloo ku dadaashaan inaad kala caddaysaan warka aad hubtaan oo runta ah iyo wixii faallo ah oo aad soo xuuraansateen ama meelo kale ka soo xigateen.
Haddii aad sumcaddiina dhowrtaan oo summaddiinu noqoto “Run Sheeg”, markaas xogta runta ah waa la idin la soo raadsanayaa oo adinku ma raadin doontaan ee waad kala dooran doontaan.
Iska ilaasha inaad la mid noqotaan sida kuwa dhaqankoodu yahay “wax badan sheega waxbaa run ka noqon doonee”, sida caasimada.net
Maanta intaas ha inoo joogto.